”अस्पतालमा संक्रमितको उपचारका लागि बेड अभाव नहुन्जेलसम्म लकडाउन हुँदैन”
काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्कालै लकडान नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या दिन दिनै तीव्र गतिमा बढिरेको बेला जनमानसमा फेरी देशब्यापी लकडाउन हुने हो की भन्ने आशंका भइरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल लकडान नगर्ने जनाएको हो ।
यसअघि मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघे लकडाउन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । साथै आज हालसम्मकै उच्च कोरोना संक्रमितको संख्या थपिएसँगै सक्रिय कोरोना संक्रमितको संक्रया २५ हजार नाघेको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अस्पतालमा संक्रमितको उपचारका लागि बेड अभाव नहुन्जेलसम्मम लकडाउन नहुने बताए ।
उनले भने, ‘संक्रमित हरुलाई बेड नै नभएर भुइँमा राख्नुपर्ने स्थिति आयो भने मात्र लकडाउन हुन्छ ।’ साथै उनले यही अवस्थामा सं’क्रमितको संख्या बढे अस्पतालमा बेडको अभाव हुनसक्ने बताएका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा उपत्यकामा थप १ हजार ६ सय ८४ सं’क्रमित फेला परेका छन् । जसमध्ये काठमाडौंमा मात्र १ सय २ सय ९६ जना सं’क्रमित थपिएका छन् भने ललितपुरमा २ सय ९३ जना र भक्तपुरमा ९५ जना सं’क्रमित देखिएका छन् ।
यस्तै, नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३४३९ जनामा कोरोना भाइरसको सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । देशभरका प्रयोगशालामा १४२०९ नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरुमा सं’क्रमण पुष्टि भएको हो ।
देशका बिभिन्न भागमा ३ हजार ४ सय ३९ सं’क्रमित थपिएसंंगै नेपालमा सं’क्रमितको कुल संख्या ९४ हजार २ सय ५३ पुगेको छ । ६८ हजार ६६८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र ११२६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने देशभर २५ हजार ७ संक्रिय संक्रमित छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका ७ सहित कोरोना भाइरसबाट थप १५ जनाको मृ’त्यु भएको छ । काठमाडौंका मृ’तकमा ४ जना पुरुष रहेका छन् भने २ महिला रहेका छन् । यस्तै ललितपुरमा १ जना पुरुषको मृ’त्यु भएको छ ।
त्यस्तै, दाङ, सिरहा र रौतहटमा पनि १/१ महिलाको मृ’त्यु भएको छ । यसैगरी मोरङमा थप २ पुरुषको पनि मृ’त्यु भएको छ भने चितवन, रुपन्देही र नवलपरासीमा पनि १/१ जना पुरुषको मृ’त्यु भएको छ ।
स्वास्थय मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले ५ महिला र १० पुरुष गरी थप १५ जनाको मृ’त्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृ’त्यु हुनेको कुल संख्या हालसम्म ५७८ पुगेको जानकारी दिए ।